राष्ट्रियसभाका लागि एमाले र माओवादीबीच सिट बाँडफाँड, कसलाई कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
राष्ट्रियसभाका लागि एमाले र माओवादीबीच सिट बाँडफाँड, कसलाई कति ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा ४३ सिटमा साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकमा वाम गठबन्धनको कार्यदलले उम्मेदवारको संख्या तय गर्दै सिट बाँडफाँड गरेको हो। एमालेबाट २९ र माओवादी केन्द्रबाट १४ उम्मेदवार उठाउने निर्णय भएको कार्यदलमा एमालेका सदस्य सुवास नेम्वाङले बताए। बाँकी रहेका १३ सिटमा अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरेर उमेदवार दिने विषयमा कार्यदलले निर्णय गरेको छ ।
आयोगले माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ र सोही दिन प्रकाशित नामावलीमा दाबी विरोधको समय दिएको छ। उजुरी उपर छानबिन गर्दै माघ ७ गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। माघ १० गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरिनेछ। उम्मेदवारको सूचीमाथि दाबी विरोधका लागि आयोगले माघ ११ र १२ गते छुट्याएको छ। उम्मेदवारको मनोनयन पत्र र उजुरी निवेदनमाथि जाँचबुझ गर्दै निर्णय माघ १३ गते गरिनेछ।
‘मागेर खाने हामी के को स्वाभिमानी’
काठमाडौं, देशभरि भारतीय नाकाबन्दीको विरोध भैरहेको बेला लोक गायक पशुपति शर्माको बहुचर्चित भिडियो बजारमा आएको […]